Yakanakisa uPVC Column & Casing Pipe Mugadziri Fekitori muIndia
Yakakwirira Hunhu uPVC
Column Zvikwepa Mugadziri 100% isina ngura uPVC yekoramu mapaipi ane Power Lock yekuvaka matsime emvura anoshanda Wona Range
Dhawunirodha Catalog UPVC HDPE Pipe
mugadziri Kuvandudzwa kwebudiriro nemaindasitiri kazhinji zvakagara zvichiratidza kushingairira mukuparadza masango zvekuti zvese zvakaitwa pakuchengetedza nekugadzira hazvikoshi pakuenzanisa. Wona Range Dhawunirodha Catalog
Kutsvaga PVC Column & PVC Casing Pipe?
uPVC Mapaipi Ekugadzira Kambani
Kuve inotungamira ISO 9001 yakasimbiswa manejimendi manejimendi, pombi-yekugadzira mhando kubva kuIndia, isu kuVinyl Tubes, chengetedza zvese zvaunoda zvemvura manejimendi. Isu tinopa Yakakwirira Yemhando yepamusoro UPVC Column Pipes, Casing & Well Screen Pipes, Piezometric Pipes, Pressure Pipes, SWR Pipes, Drainage Pipes uye Plumbing Pipes pane ako emvura manejimendi anodikanwa. Isu tinopa akanakisa zvigadzirwa mhinduro kune vatengi vedu kuburikidza neyakajairika mitsva, yakanyanyisa kugona, akasiyana maitiro, uye mhando zvigadzirwa.
Kuwana chinzvimbo chehutungamiriri nekupa inodhura mhinduro yemapaipi emvura, kuona kugutsikana kwevatengi nekupa mukubudirira kwavo.
Mutungamiri wepasi rese mupombi yemvura Kuti ubude semutungamiri wepasi rose muindasitiri yemapaipi emvura kuburikidza nekuvandudza uye kugamuchirwa kwetekinoroji nyowani uye nekusagadzikana maitiro ekushandura mazano matsva kuita zvinhu zvisingawanzoitika.
Kugadzira mvura yega yega inobereka mushe pasirese yakanyatsoita zvine hunyanzvi hwekuchengetedza ichichengetedza kugona kwayo nguva dzese. Nekudaro, tinotarisira kuchengetedza masekondi 1.3 emagetsi emagetsi kuburikidza nekuedza kwedu.
uPVC Zvigadzirwa Zvatinonunura
Nyanzvi dzeMvura Management
Yepamusoro-soro Yemhando yePVC Column Pipes Mugadziri 100% isina ngura uPVC pombi yemapaipi ine Power Lock yekuvaka matsime emvura anoshanda Kumba Mabasa Edu uPVC…
Iyo PVC Pressure Pipes inopihwa neyakagadzika socket uye yakakodzera kune solvent simende jointing uye Bell inopera pachikumbiro. Iko kushandiswa kukuru kwePVC Pressure Pipes kuri mune zvekurima, zvekuwaniswa kwemvura, kudiridza kwedrip, mitsara yekumwaya, nezvimwewo pamwe nekugovaniswa kwemvura yekunwa.
Nei Vinyl Zvikwepa?
Pane chikonzero chimwe chete nei iwe uchizosarudza Vinyl mapaipi pane ako emvura manejimendi anodikanwa: Kuvimba, kuvimbika uye kuvimbika. Inovimbwa nenyika makumi mana nemana vanopfuura 44+ vagoveri pasi rose, uye inozivikanwa nekuvimbika kwezvizvarwa zvina zvekupedzisira, isu kuVinyl, tinopa mapaipi aine vimbiso yakakwana uye chivimbo chedu chigadzirwa mhando.
Vinyl yakazvipira kupa vatengi vayo zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvisina hurema kuburikidza nechirongwa chekuenderera zvirinani. Hunhu hwakatangira kupfuura huwandu, inova chirevo chekambani. Vinyl inotsigirawo vatengi vayo kuburikidza neindasitiri-inotungamira technical service, uye technical technical uye kudzidziswa.
comming Munguva pfupi
Kwakatangira Vinyl kunoenda kumashure senge 1941, uye yakagadzwa semhuri inomhanya bhizinesi. Muna 1971, Vinyl yakagadzira North India yekutanga fekitori yePvv. Ikozvino ichimhanyisa chizvarwa chechitatu chemhuri, Vinyl inomira sebhizimusi rinomhanya zvakanaka nemakumi emakore ehunyanzvi kumashure.
Vinyl inozvirumbidza yevashandi vakazvipira uye vane hunyanzvi, yakanangana nekuvaka zvigadzirwa zvekupayona. Nekuda kwehunyanzvi mukambani iyi, Vinyl yakakwanisa kugadzira mapaipi ePV nePVC ayo anopa kurasikirwa kwepasirose kwakaderera. Vinyl yakagadzira zvakare patent-yakamirira magetsi kukiya inoshandiswa mumapombi epombi.
Fekitori yaVinyl kuNorth India inopararira pamusoro pe65,000 sq.m nharaunda, yakashongedzwa neGerman pombi yekugadzirisa mitsara, uye anopfuura gumi nemaviri CNC michina. Ivo vanogadzira 12,000 MT yeP uPVC gore rega mukoramu, casing, SWR uye pombi dzekumanikidza. Fekitori nyowani iri kuuya mudhorobha rechiteshi cheKandla, ichipa Vinyl mukana wekukurumidza kutumira pasi rese.
Isu Tinonunura Chiitiko
uPVC Pipe Zvishandiso
Magetsi / Kutaurirana
VINYL Pombi Kune Wese Munhu
Isu tiri ivo vanotungamira ISO 9001 Certified manejimendi manejimendi emvura
Hwakavimbiswa mhando. Nyika yeunyanzvi hwekugadzira uye ISO, NSF, WRAS, ASNZ, CE - EUROGLOBAL yakasimbiswa.
Benifits yeVINYL Mapaipi
100% Rinobvumidza Uchapupu
Kukakavara Pasina Pamusoro
Kunonyanyisa Mutoro Kugona
Defense Kuvaka Canada
“SCG iri kuenderera mberi nekupa basa rakatanhamara uye kugona kwehunyanzvi kumabasa akasiyana siyana kubva kudiki kusvika kunzvimbo huru. Kunyanya kukosha SCG inovavarira kunzwisisa zvimiro zveprojekti uye kupa mhinduro dzinoshanda uye dzinoshanda. Kuzvipira kwavo kuendesa rakasarudzika sevhisi kunoonekwa mune ese basa ravanotora. "
“Kwemakore anodarika gumi vachishanda nemaSCG Maindasitiri munzvimbo dzakashatiswa dzezvakatipoteredza vakaramba vachiratidza kugona kwounyanzvi mukuona kwakanaka kwevatengi. Maitiro avo ekubatirana uye chaiyo yenguva kuchinjika mukugadzirisa kune mamiriro ezvinhu akachinja mukubudirira kwezvakawanda zvezvinangwa zveprojekti. "
“Panguva yandakashanda neCSCG pachirongwa ichi, ndaona Mike Campbell nechikwata chake vachiziva zvikuru uye vachitungamira mhedzisiro. Kubva pane yekutanga ongororo yekuedza uye nzwisiso yakasimba yesuburface. mamiriro, kunyanya akatsemuka enzvimbo enzvimbo yepamusoro. ased pabasa ravo pachirongwa ichi. "
Kugadzira Ramangwana reMvura
Chii Chiri Kuenderera Mberi MuBlog Redu?
Bata hofisi yedu kuti utore mahara! Nguva dzose zvakanaka kuve nepfungwa dzakaomarara pabhajeti yako
panguva ino kutigonesa kutora sezviri kudikanwa
5 Zvikonzero nei uchifanira kushandisa uPVC Pombi dzeMvura Projekiti
Ichikurumidza kuwedzera kuora kwemvura uye sewerji masisitimu nekuda kwehuori, kudonha, uye kutyora kwesimbi pombi zvinhu zvinorova kugona kwedu kupa yakachena uye…
Kuchera tsime remvura kunobatsira here? - Vinyl Pipes
"Musika unogara uchichinja, uye zano hombe ndere kuteerera uko musika urikuenda nekugadzirisa zvishandiso zvako, bhizinesi, webhusaiti kuti zvikwane…
Zvinetso zveMvura zveRussia- Tarisa zvakadzama
Mamiriro Ehunhu uye Yakashata Mamiriro ekunze uye Mamiriro Ezvinhu Anoshandura JA Trudeau kuenda kuYartruba Vinyl Mapaipi akatangisa mapombi ayo ekoramu muRussia nedunhu reCIS…
7 Pamusoro ePVC Column Pipes maficha ekuziva - Vinyl Mapaipi
Mapurojekiti ekuchengetedza mvura anoshandisa pombi dzinonyudza dzinonyanya kuvimba nemapombi emakoramu kununura mvura kubva mutsime zvakanaka. Saka nekudaro, kuverengera mhando yepamusoro ye…
Pombi neMapaipi mutengesi Anofanira Kuverenga - Vinyl Pipes
Kana iwe uri Borewell Driller kana pombi & pombi mupi uye uchiri kushandisa mapaipi esimbi saka iyi blog ndeyako. Unofanira…